အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ရင်း ချစ်မိသွားကြ တဲ့ ဂျွန်ဝိုင်းနဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူတို့ အကြောင်း – Zartiman
အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ရင်း ချစ်မိသွားကြ တဲ့ ဂျွန်ဝိုင်းနဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူတို့ အကြောင်း
အပျိုကြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ငြိမ်းမြတ်သူကတော့ မီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးအခေါက်မှာ ချစ်သူရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း အရိပ်အ မြွက်ဖြေကြားခဲ့သလို မင်းသားဂျွန်ဝိုင်းကလည်း အနုပညာလောကသားအချင်းချင်းပဲ လက်တွဲဖော်ရွေးချင်ကြောင်း ဖြေကြားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးရော ဘယ်လိုမြင်လဲ ? သဘောတူရဲ့လား။
နာမည်ကြီးမင်းသား ဂျွန်ဝိုင်းဟာဆိုရင်တော့ မကြာသေးမှီက တက်သစ်စမင်းသမီး ငြိမ်းမြတ်သူနဲ့ တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း ပရိ သတ်တွေလည်း သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရမင်းသားဂျွန်ဝိုင်းနဲ့ ငြိမ်းမြတ်သူတို့ဟာ ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပြီလို့ သ တင်းရရှိထားပါတယ်။
မင်းသားဂျွန်ဝိုင်းရဲ့လက်ရှိချစ်သူ မြင့်ရွှေစိန်ထွန်းနဲ့ လက်ရှိဆက်ဆံရေးကလည်း အေးခဲနေပြီးပြတ်သားသလောက်ဖြစ်နေချိန်မှာ ဒီလို သတင်းတွေ ထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းလေးကို likeနဲ့ Shareလုပ်သွားကြဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုပေးတဲ့ အ တွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အပြိုကွီးလုပျမယျဆိုတဲ့ငွိမျးမွတျသူကတော့ မီဒီယာတှနေဲ့တှဆေုံ့ခဲ့တဲ့ နောကျဆုံးအခေါကျမှာ ခဈြသူရှိနပွေီဆိုတဲ့အကွောငျး အရိပျအ မွှကျဖွကွေားခဲ့သလို မငျးသားဂြှနျဝိုငျးကလညျး အနုပညာလောကသားအခငျြးခငျြးပဲ လကျတှဲဖျောရှေးခငျြကွောငျး ဖွကွေားထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရော ဘယျလိုမွငျလဲ ? သဘောတူရဲ့လား။
နာမညျကွီးမငျးသား ဂြှနျဝိုငျးဟာဆိုရငျတော့ မကွာသေးမှီက တကျသဈစမငျးသမီး ငွိမျးမွတျသူနဲ့ တှဆေုံ့မိတျဆကျခဲ့တဲ့အကွောငျး ပရိ သတျတှလေညျး သိပွီးဖွဈမှာပါ။ နောကျဆကျတှဲသတငျးတှအေရမငျးသားဂြှနျဝိုငျးနဲ့ ငွိမျးမွတျသူတို့ဟာ ခဈြသူတှဖွေဈနကွေပွီလို့ သ တငျးရရှိထားပါတယျ။
မငျးသားဂြှနျဝိုငျးရဲ့လကျရှိခဈြသူ မွငျ့ရှစေိနျထှနျးနဲ့ လကျရှိဆကျဆံရေးကလညျး အေးခဲနပွေီးပွတျသားသလောကျဖွဈနခြေိနျမှာ ဒီလို သတငျးတှေ ထှကျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ သတငျးလေးကို likeနဲ့ Shareလုပျသှားကွဖို့ မမနေဲ့ဦးနျော။ အခြိနျပေးပွီးဖတျရှုပေးတဲ့ အ တှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
ပုရိသတွေ ရင်ခုန်သံ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်အောင် လုပ်ချလိုက်ပြန်တဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာ(ရုပ်သံ)